ट्रोलर र शाहरुखको सवाल जवाफ : ‘पिएम केयर फन्डमा कति पैसा दियौ ? ’ शाहरुखले भने, ‘खजाञ्ची हो र ?’ - The Divine News ट्रोलर र शाहरुखको सवाल जवाफ : ‘पिएम केयर फन्डमा कति पैसा दियौ ? ’ शाहरुखले भने, ‘खजाञ्ची हो र ?’ - The Divine News
ट्रोलर र शाहरुखको सवाल जवाफ : ‘पिएम केयर फन्डमा कति पैसा दियौ ? ’ शाहरुखले भने, ‘खजाञ्ची हो र ?’
हरबखत चर्चामा आइरहने बलिउड अभिनेता शाहरुख खान यतिबेला सामाजिक संजालमा आफ्नु जवाफका कारण चर्चामा रहेका छन् ।
शाहरुखले सोमबार ट्वीटरमा प्रश्नोत्तर सेसनको आयोजना गरे जुन ट्वीटर इन्डियाको एक नम्बरमा ट्रेन्ड भयो । यतिबेला शाहरुखले आफ्नो प्रशंसकले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिए । तीमध्ये केही रमाइला थिए भने केही तिखा । उदाहरणका लागि एक प्रयोगकर्ताले शाहरुखलाई सोधे, ‘सर साँचो–साँचो भन्नु पीएम केयर्स फन्डमा कति दिनुभयो ?’ यसको तिखो जवाफ दिँदै उनले लेखे, ‘साँच्चै… खजाञ्ची हो र ?’
“पलाश” आजदेखी सुरु